Software Engineering Courses | KMD
Education > Software Engnieering Courses
မိမိတက်ရောက်လိုသည့် သင်တန်း၏ တွင် နှိပ်၍
Computer Programming ကို စတင် လေ့လာလိုသုများအတွက် Programming ၏ အခြေခံ သဘောတရားများကို အချိန်တိုအတွင်း လက်တွေ့ကျကျ သင်ကြားပေးမည့် အကောင်းဆုံး သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။
• Introduction to Software Engineering • Database with Microsoft Access 2010 • Microsoft Visual Studio with VB.Net
Microsoft.Net Framework ဖြင့် C# Windows Application Developer တစ်ဦးအဖြစ် လုပ်ငန်းခွင် ဝင်မည့်သူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးပါက KMD မှပေးအပ်သော Software Engineering Certificate သာမက KMD နှင့် Microsoft မှ ပူးပေါင်းပေးအပ်သော Querying Microsoft SQL Server 2012 (70-461) သင်တန်း ပြီးဆုံးကြောင်း Certificate ပါရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
• Computer Programming • System Analysis and Design • Project Management • Object Oriented Programming Fundamental Concepts
• C# Windows Application with Practical Project • Microsoft SQL Server 2012 Database
Web နည်းပညာ အခြေခံမှစ၍ လေ့လာချင်သူများ၊ Web ဒီဇိုင်းဖန်တီးချင်သူများ နှင့် Web ဒီဇိုင်နာအဖြစ် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်လုပ်ချင်သူများ တက်ရောက်ရန် အထူးသင့်လျော်သော သင်တန်း ဖြစ်ပါသည်။
Open Source Language တစ်ခုဖြစ်သည့် PHP အား အသုံးပြု၍ Dynamic Web Application များ ရေးသားနိုင်ရန်၊ ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် Web Developer အဖြစ် ရပ်တည်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်နှင့် သင်တန်းပြီးဆုံးပါက မိမိကိုယ်တိုင် Web Application များရေးသားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
- ဆနျးသဈသော Website Design မြားကို Any Device ပျေါတှငျ အသုံးပွုနိုငျရနျနှငျ့ လကျတှဖေ့နျတီးခငျြသူမြားအတှကျ သငျကွား ပေးမညျဖွဈပါသညျ။ - အခြိနျတိုအတှငျး Responsive Website Design တဈခုကို လကျတှရေ့ေးသားနိုငျမညျဖွဈပါသညျ။ - HTML နှငျ့ CSS သိထားသူမြားအတှကျ သငျတနျးတကျရောကျ ပွီးပါက အလုပျအကိုငျ အခှငျ့အလမျး ပိုမိုရရှိနိုငျမညျဖွဈပါသညျ။
• Responsive with HTML5 • CSS3• Bootstrap Framework
Head Office: No 174-182, Pansodan Road (Middle Block), Kyauktada Township, Yangon, Myanmar. Tel: +95-1-381129, 381776, 381035. Fax : +95-1-375334